411 paWheelchair - Mibvunzo Inowanzo Bvunzwa
Kana iwe uchitsvaga chaiyo ruzivo nezve mavhiripu, unogona kutarisa kuburikidza neyedu wiricheya zvikamu kuti uwane chigaro chakanakira mamiriro ako. Kana iwe uri muchengeti uye uchida rumwe ruzivo nezve yakatarwa modhi, unogona kushanyira yedu FAQ peji kuti uwane zvimwe nezve zvigadzirwa zvedu.
Chigadzirwa & Kutsigira Mibvunzo
PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru echinyorwa mavhiripu kusarudza kubva. Kazhinji, kana iwe uchikwanisa kuzvikurisa mune wiricheya, iwe uchazoda iyo yakanyanya kureruka kugadzikana wiricheya inowanikwa. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nehuremu hwechigadzirwa uye bhajeti. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako:
senga mavhiripu ndiyo sarudzo yakanaka yekutakura mumwe munhu kuenda uye kubva kunzvimbo dzaungade kufamba nadzo. Kazhinji, a chokufambisa wiricheya yakatetepa uye yakareruka kupfuura a wheelchair yakajairwa, Ichiita sarudzo yakanaka yezvipingamupinyi zvakaomarara uye nzira dzakamanikana. Pane misiyano pakati pemagumo edu epamusoro Tsaona Yakaedzwa S-ERGO akateedzana kutakura mavhiripu uye edu ehupfumi giredhi zvigadzirwa. Dzimwe sarudzo huru dzinosanganisira yedu ERGO LITE uye S-115TP. Isu zvakare tine wiricheya yakagadzirirwa kufamba, TV-10B.
Yakawanda yakaenzana uremu mavhiripu tanga pa34 mapaundi, mumwe chiyero chehuremu chewiricheya sarudzo hombe kana iwe uchida a wiricheya izvo hazvingashandiswi kakawanda; kazhinji maawa matatu kana mashoma pazuva uye nekuchinja kusingawanzo kuitika. Yedu yakazara sarudzo inowanikwa kubva kune akanyanya mhando mamodheru ane akamisikidzwa legrests uye armrests kune mavhiripu izvo zvine sarudzo yekusimudza magaro emakumbo uye mabhuremu anobviswa. Pamusoro pezvo, isu tine zvimwe zvekushandisa zvekusimudzira wiricheya yako uye Maputi efuro uye / kana Gel Makushoni kupa imwe nyaradzo.
Nemahuremu ari pakati pe25-34 mapaundi, yedu isina kurema wheelchair isarudzo huru kana iwe uchida a wiricheya iyo inowanzo shandiswa, kana iwe uchida sarudzo dzakasarudzika, kana kana iwe uine moyo wako wakaiswa pane yakatarwa furemu uye / kana upholstery ruvara musanganiswa. Ichi chikamu chinozvivhara zvese, zvine lightweight mavhiripu pamakwikwi emitengo. Izvi mavhiripu kupa zvimwe zvingasarudzwa uye isu tinowanzokurudzira kuti kuenzanisa kuitwe nedanho rinotevera kumusoro chikamu chiri chedu ultralight uremu mawiricheya uko kwekupedzisira kufamba zvishandiso uye maficha ari pakanyanya kwazvo.
Ichi ndicho chikamu che mavhiripu panogara zvakanakisa zvepamusoro. With wiricheya zviyero zvakaderera kunge 14.5 mapaundi, mune ese ari maviri S-ERGO uye zvakapusa mhando dzakasununguka dzakasununguka, kurema kwekupedzisira wiricheya ndeyemushandi wenguva yakazara uyo anoda kushanda uye kune avo vanoda kureruka wiricheya zvinogoneka kuve nyore kwekuzvishingisa uye kutakura. Muchikamu ichi, iwe unenge uine huwandu hwezvinhu zvisati zvawanikwa pane chero vakwikwidzi senge standardize tsaona bvunzo pa S-ERGO mhando uye matani e sarudzo uye zvishongedzo isina kupihwa pane mamwe mabhesi muzvikamu wiricheya Zvisarudzo.
Our ERGO ATX inopa yakanakisa musanganiswa we wiricheya maindasitiri ekugadzira. Aya ma criterias anosanganisira asi haana kuganhurirwa kune yakanyanya kugadziridzwa, kuomarara, ultra lightweight, nyaradzo, foldability, chimiro uye chakanakisa kuita. Yedu Ultralightweight wiricheya chikamu chinotora zero kutsauka nebazi redu reR & D kusundira matekinoroji ekupedzisira ekugadzira uye kugona uye kuendesa iwo kwauri chaiko mumigwagwa.
Kudzokera kumashure kana kuti zvimwe kuzivikanwa se "musana wepamusoro" wiricheya sarudzo hombe kune avo vanoshandisa yakawanda yenguva yavo mu wiricheya sezvo ichipa dzimwe nzvimbo dzekugara. Mukuenzanisa, a kurereka wiricheya inopa kumwe kumisikidza uye kumanikidza kuregererwa kune avo vanoda kumwezverwa kumanikidzwa kwekushandisa kwenguva refu kwea wiricheya. Ose maviri mapoka edu akanyatso kuderedza huremu hwevatsigiri vakwikwidzi saka ramba uchifunga kana uchitenga pamutengo.
Yedu Bariatric wiricheya ine yakakwira huremu chivharo chemazana mapaundi mazana, idzi inorema basa mawiricheya inogona kugara chero chero mushandisi ane yakanyanya chigaro upamhi of 30 ″ paupamhi. Karman anotakura yakazara yakazara ye basa rinorema mavhiripu, kubva pane zvemari bariatric kutakura mawiricheya, kuti yakaoma zvikuru-inogadziriswa / echinyakare mamodheru. Isu zvakare tine yakareruka kurema bariatric wiricheya muindastiri kune kwayo chigaro upamhi uye huremu chivharo.
Ndakamira mune wiricheya ndechimwe chezvinhu zvine mukurumbira zvigadzirwa zvatakagadzira uye kugadzirwa mukuedza kwedu kubvumira iyo kufamba vasina simba kutora hupenyu hwavo kudzokera mumaoko avo. Hatina kumira nekungobvumidza vanhu kumira mu wiricheya; isu takachiita icho chinokwikwidza zvakanyanya mutengo wechigadzirwa muchikamu chayo, kutyaira hupfumi kupinda mazuva ese imba inobata. Verenga zvimwe pane zvese zvinobatsira, masosi emari, uye sarudzo dzemari kana iwe uchifarira yako wiricheya kubatsira iwe kumira.
Yedu S-Rakaumbwa Seating System inopa zvakawanda zvakanaka pamusoro peyakajairwa wiricheya yemawoko chigaro. Haingori chete kuti kumanikidzwa kunogoverwa zvakaenzana pamakumbo nekumashure, inopawo pekugara pakadzika uye inodzivirira kumberi kutsvedza. Nyika yekutanga S-Yakaumbwa ergonomic zvigaro yakagadzirirwa zvakananga kunyaradzwa uye ergonomics. Iine anopfuura makumi maviri nemaviri patent uye yakatangwa seGlobal Chigadzirwa, ichi chigadzirwa chakasarudzika chinokwanisa kudzikamisa kumanikidza, kudzikisira kutsvedza uye kusimudzira kumira kwakanaka. Ese edu maS-ERGO mafuremu ANOEDZWA. Dambudziko iri rakasangana neUltralight Kurema, Ergonomics, Nyaradzo, uye Kuchengeteka mupfungwa uye neyakaguma chigadzirwa ichigadzika bhaa yepamusoro unhu zvinogoneka. Dzidza zvimwe zvakasarudzika mamakushini anorapwa ne AEIGIS® kupa iyo anti-microbial yakavharwa zvigaro sisitimu.
[hr] [toggle title = "AEIGIS® inobatwa makushiti echigaro anondibatsira sei uye chii ichocho?"]
Dzvanya pane zvinotevera zvinongedzo uye mavhidhiyo anoenda zvakadzama pa AEIGIS® tekinoroji uye usakanganwa kuona vhidhiyo. Iyo yakaoma uye yehunyanzvi, asi kuti zvinhu zvireruke, ingo ziva kuti ndiyo yakanakisa pamusika uye tinodada kuzviisa. CLICK HERE yevhidhiyo. Zvese AEIGIS® makushoni ndiwo muchina unogona kuwachika uye kuoma-kugona. Mazhinji anogona kubviswa zviri nyore pasina maturusi.
Ndeupi mukana weT-6 Giredhi Aluminium maringe neimwe Aluminium kana Simbi?
Pound yepondo, 6061-T6 yakasimba kudarika imwe simbi uye yakajeka. Zvichitaurwa zviri nyore, iyi yakasimba simbi inoshandiswawo mukuvaka Aircrafts. Inopa simba rakakwirira zvakanyanya kuyerwa kuyera kuendesa iyo zvinobatsira kumushandisi wekupedzisira. Icho chinhu chinodhura, zvisinei, iwe unokodzera chakanakisa uye isu tinomira kumashure kwadzo. Ichi ndicho chikonzero vedu Yakaomeswa Hupenyu hweMarondera yakajairwa pane ese S-ERGO mafuremu.
Ino ISO 7176-19 Crash Kwayedzwa S-ERGO Mafuremu anoita mutsauko here?
Hungu, kuvaka a wiricheya haisi kungoisa chete mafuremu uye kuibatanidza pamwe chete. Kutsvaga anoshanda kwazvo mageometri uye weld nzira ndedzechokwadi hunyanzvi. Hatife takabayira kuchengetedzeka, kutaura zvazviri, isu tinokunda pazviri seimwe chete yezvigadzirwa izvo zvinoita kuti uyu uve muitiro mutsika unowanikwa mune zvese S-ERGO mafuremu.
Kuenderera Kuverenga pane CRASH TEST WC19 vs ISO7176 / 19
Mubvunzo: Ndeupi musiyano uripo pakati pe ANSI / RESNA WC19 uye ISO 7176/19?
Mhinduro yakapusa kumubvunzo uyu ndeyekuti kutevedzera kwe wiricheya ne ANSI / RESNA WC19 (pano inonzi WC19) zvinoreva kutevedza ISO 7176-19 (pano kunzi 7176-19) nezvisaririra zviviri zvine chekuita ne a) maitiro ekudzokera kumashure musoro weyedzo dummy uye b) iyo inobvumidzwa lateral spacing ye wiricheya nzvimbo dzekuchengetedza, asi zvinopesana hachisi chokwadi. Nekudaro, usati wapindura uyu mubvunzo zvakadzama, zvinofanirwa kusimbiswa kuti ANSI / RESNA WC19 (WC19) uye ISO 7176/19 zvakagadzirwa pamwechete uye nekubatana kwakakosha uye tsamba pakati peKushanda Boka reRNA wiricheya Standards Committee inozivikanwa seSubcommittee pa mavhiripu uye kutakura (SOWHAT) uye iro Rinoshanda Boka 6 re ISO TC73 SC1. Muchokwadi, hwakawanda hutungamiriri uye kunyora kwematanho maviri aya kwakabva kune vamwe vanhu.
Kunyangwe paive nekuchinjana kukuru kweruzivo nekukurukurirana pakati pemapoka maviri akasimukira-ekuvandudza, kuyedza kwese kwakaitwa kuyananisa zviyero zviviri panguva yezvaiitika panguva imwe chete. Nekudaro, pane misiyano pakati pemagwaro maviri aya. Iyi misiyano iri kunyanya ine chekuita neyakaganhurirwa chiyero che wiricheya hukuru hwakafukidzwa neIO 7176-19, iyo parizvino isingapi kuyedza kwevana mavhiripu, uye nezve dhizaini uye mashandiro ekuita zvimwe kunze kweiyo 48-kph, 20-g yekumberi kukanganisa bvunzo.
Kune zvakare mumwe musiyano wekutanga munzira yekuitisa yakanangana neyakaedzwa bvunzo mune iyo WC19 inotsanangudza uye, muchokwadi, inoda kushandiswa kwesosi yechina-tambo tambo-mhando tayi pasi kuchengetedza iyo wiricheya papuratifomu yakasungirirwa. Nokuenzanisa, ISO 7176-19 inoda kuti iyo wiricheya chengetedzwa netambo ina-tambo yakasungirirwa pasi inoenderana neiyo yekumberi yekukanganisa bvunzo yeIO 10542, inogona kunge iri yekutengesa tayi pasi kana surrogate tie pasi.
Izvo zviyero zvinosiyana muchiyero mune iyo ISO 7176-19 parizvino inoshanda chete kune mukuru mavhiripu uko kuongororwa kunoitwa kushandisa 168-lb anthropomorphic test kifaa (ATD), inonyatso kuzivikanwa sepakati nepakati murume mukuru kupaza-test dummy. WC19 inoshandawo kune vana chiremba mavhiripu yevana vane makore matanhatu ekuberekwa uye pamusoro, uye nekudaro inopa kuitisa iyo yekumberi mhedzisiro bvunzo kushandisa mamwe akakura saizi maATD ari padyo, asi pasi, epamusoro uremu renji kune iro dhizaini dhizaini yeiyo wiricheya. Nekudaro, chiremba wevana wiricheya inogona kuyedzwa kuWC19 asi haigone kuyedzwa zviri pamutemo kusvika ku7176-19 panguva ino. (Cherekedza kuti 7176-19 parizvino iri kuongororwa uye iyo vhezheni itsva ichasanganisira yevana mavhiripu muChikamu).
Ose matanho anosanganisira iwo akafanana dhizaini maringe nerudzi uye nhamba ye wiricheya nzvimbo dzekuchengetedza, mune izvo zvirevo zviviri zvinoda kuti iyo wiricheya ipa mana ekuchengetedza nzvimbo dzekuchengetedza kushandisa ina-poindi, tambo-mhando yakasungirirwa yakasungirirwa inoenderana neakafanana mamiriro eijometri maratidziro. Nekudaro, iwo muyero unosiyana zvine chekuita neyekuvhura geometry zvekuti WC19 inonyanya kudzvinyirira. Kunyanya, iyo yekuchengetedza-poindi kuvhura kweWC19 inofanirwa kunge iri 50-kusvika-60 mm pakureba uye 25 kusvika 30 mm muhupamhi, nepo kuvhura kunodiwa ne7176-19 kunofanirwa kuve kwakakura kupfuura 50 mm pakureba uye kukura kupfuura 25 mm mukati upamhi. Nekudaro, kuvhura kwakakura kupfuura 60 mm pakureba uye / kana kukura kupfuura 30 mm muhupamhi kunotevedzera 7176-19 asi kwete neWC19. Kuvhurika kwese kwekuchengeteka kunoenderana neWC19, zvisinei, kunoenderana ne7176-19.
Pamusoro pezvo, zviyero zvinotsanangudza kuti idzi nzvimbo dzekuchengetedza dzinofanirwa kuve dziri mukati medzimwe nzvimbo dzine hukama kune imwe uye pasi. Aya matunhu akafanana mukutarisa kwekumativi kwematanho maviri asi akasiyana mukutarisa kwepamusoro. WC19 parizvino inobvumidza nzvimbo dzekuchengetedza kuve mukati me100 mm dzeumwe neumwe gare gare asi 7176-19 haivabvumidze kuve padyo kupfuura 250 mm. WC19 iri, zvakadaro, ichidzokororwa uye yekumisikidza nzvimbo yekumisikidza yeWC19 ichave yakafanana neiya ari muna 7176-19 mushanduro nyowani.
wiricheya-Anchored Belt Zvinodzora
Musiyano wekutanga mukugadzirwa kwezvinodiwa zvemaviri aya ndeyekuti WC19 inoda kuti a wiricheya ipa iyo wiricheya anogara nesarudzo ye kushandisa a wiricheya-akagadziriswa mabhande ebhande uye kuti a wiricheya-bhandi repamakumbo rinoshandiswa rinoshandiswa panzvimbo yemotokari-yakasungirirwa bhanhire repamberi mune yekumberi mhedzisiro bvunzo. 7176-19 anotendera a wiricheya kupa, uye kupunzika kuyedzwa ne, a wiricheya-bhandi repamakumbo, kana kunyange wiricheya-mapapiro emabhande epamafudzi (sezvinoita WC19), asi hazvidi izvozvo. Nekudaro, izvo magadzirirwo anodikanwa eiyo wiricheya-akagadziriswa mabhandi ebhande akafanana mune ese matanho.
wiricheya size uye Kugadziridza
WC19 inoisawo dhizaini dhizaini pahukuru, uremu, uye kumisikidzwa kwe wiricheya. The wiricheya anofanira:
inopa nzvimbo yekugara ine seatback angle yemadhigirii makumi matatu kana zvishoma kusvika pakamira (semuenzaniso, a kufamba chishandiso chinobvumidza chete kudzikama kwazvo mamiriro hazviite),
vane huwandu hwakazara pasi pe182 kg (400 lb),
uve nehuremu hwakazara kana uchiyerwa zvinoenderana neANSI / RESNA WC-93 (muyero wehuremu hwakazara) zvekuti kureba nekufara hazvipfuuri 1300 mm ne 700 mm, zvichiteerana.
ISO 7176-19 haina kuisa chero paunogumira pa wiricheya saizi, hukuru, kana kumisikidzwa zvine chekuita nekugara.
Ose matanho anosanganisira mashandiro anoita zve mavhiripu for:
48-kph yakatarisana neyakaedzwa bvunzo
kuwanikwa kwenzvimbo dzekuchengetedza kushandisa chiyereso chakayerwa
Zvakare, ese ari maviri matanho anosanganisira kuita zvinodiwa kwe wiricheya-akagadziriswa mabhandi ekuzvidzivirira (paanopihwa muna 7176-19 uye anodikanwa neWC19) zvichibva paECE Reg. 16 kana FMVSS 209 muna 7176-19 uye pa FMVSS 209 muWC19.
Nekudaro, WC19 inotaura zvimwe zvinoitwa zvinowedzerwa zvisina kuiswa muna 7176-19, kusanganisira:
Kuedzwa kwenzira dzakasungwa dzakajeka uye kuswedera kumipendero yakapinza,
Kutarisa kugadzikana kwekufamba kwenguva (kana kufamba kwekufamba chaiko),
Kuedzwa kwekushandura nharaunda kunoenderana neChikamu 5 che ANSI / RESNA wiricheya kuyedza, uye
Kuedzwa kwe wiricheya pekugara kwemotokari-yakasungirirwa bhanhire rinodzora.
Kunze kweiyo yakajeka-nzira / yakapinza-bvunzo bvunzo, aya mamwe mabvunzo ndeyekuzivisa zvinodiwa, kwete kupasa / kutadza zvinodiwa, mukuti iyo wiricheya mugadziri anofanira kuburitsa bvunzo mhedzisiro mumabhuku avo e presale.
Yakananga Impact Kwayedza Nzira
Icho chinonyanya kukosha uye chakakosha kuita kweanodiwa ese ari maviri matanho kuita kunogutsa mashandiro mune 48-kph, 20-g yekumberi yekukanganisa bvunzo. Sezvakamboratidzwa, bvunzo iyi inoitwa nekuchengetedza iyo wiricheya papuratifomu yakasungirirwa kushandisa surrogate ina-poindi tambo-yakasungirirwa yakasungwa (S4PT) iyo yaakatsanangura muAnnex D yeWC19. 7176-19 inobvumidza bvunzo kuitiswa kushandisa yekutengesa ina-tambo tambo yakasungirirwa yakasungirirwa yakaedzwa zvakabudirira kune Annex A yeIO 10542-1 uye 2. Sezvo S4PT ichizadzisa ichi chinodiwa, inogona kushandiswa kuchengetedza iyo wiricheya muna 7176-19 kuyedza. Nekudaro, iyo yekumberi yekukanganisa bvunzo inoitwa muWC19 ine 76-kg ATD inoitiswawo zvinoenderana ne7176-19. Nekudaro, iyo yekumberi yekukanganisa bvunzo inoitwa kushandisa yekutengesa ina-poindi yakasungwa haina kuitiswa maererano neWC19.
Yepamberi Impact Performance Criteria
Chikamu 5.3 cheWC19 uye Chikamu 5.2 che7176-19 chinotsanangura iyo wiricheya mashandiro eiyo 48-kph yekumberi bvunzo yeAnnex A. Sezvakambotaurwa, nzira dzekuyedza dzakafanana kunze kwekubvumidzwa kwetambo ine tambo yakasungirirwa yakasungirirwa kuti ichengetedze wiricheya muna 7176-19 uye icho chinodikanwa chekushandisa surrogate ina-poindi, tambo-mhando yakasungirirwa muWC19. Zvakakosha, iyo yekutanga kupasa / kutadza kuita zvinodiwa, kusanganisira kumberi wiricheya uye miganho yekushanya yeATD uye zviratidzo zvekukundikana mumutoro wekutanga kutakura zvinhu, zvakafanana, kunyangwe zvakamomirirwa uye / kana kudomwa zvakati siyanei nenzira mbiri idzi.
Iko kune, zvisinei, misiyano yakati wandei mukuita kwekuita kweiyo yekumberi kukanganisa bvunzo, seinotevera:
WC19 inoda kuti zvigadziriswe zvigaro masisitimu haafanire kupatsanuka kubva kune wiricheya base furemu pane chero chinongedzo poindi, nepo 7176-19 yakanyarara pane iyi nyaya.
WC19 inoda kuti deformation ye wiricheya nzvimbo dzekuchengetedza hazvidziviriri kuregedza chero hoko dzakasungwa, nepo 7176-19 yakanyarara pane izvi.
7176-19 inoda kuti kubviswa kweATD kubva ku wiricheya mushure mekuyedzwa hakuzoda kushandiswa kwemidziyo (kunze kwekusimudza), nepo WC19 yakanyarara pane ino pfungwa.
WC19 haibvumire iyo wiricheya kukonzera kukwana kana yose kutadza kwechimwe chikamu cheyakaomeswa kana yekudzivirira system, nepo 7176-19 yakanyarara pane izvi.
Iyo yepamusoro inobvumidzwa yekumashure musoro kushanya muWC19 ndeye 450 mm kune yepakati murume mukuru ATD nepo iri 400 mm muna 7176-19.
7176-19 inotaura chaizvo kuti nzira dzekukiya dze tilt zvigaro zvigaro hazvizoratidze zviratidzo zvekutadza mushure mekuyedzwa, nepo WC19 isingatauri nezvayo tilt zvekuvharira nzira asi zvinosanganisira izvi zvinodiwa pasi pechinodikanwa chekuti "chikuru mutoro wekutakura zvikamu" hazviratidze zviratidzo zvekukundikana.
Nepo izvo zvakakosha zvinodiwa uye kupasa / kutadza maitiro eANSI / RESNA WC19 uye ISO 7176-19 zvakangofanana, pane misiyano muchiyero che mavhiripu yakafukidzwa nematanho azvino muchiyero uye padanho redhizaini zvinodiwa, muhuwandu hwezvinodiwa pakuita, uye munzira dzekuyedza uye kupasa / kutadza nzira dzeyamberi-kukanganisa bvunzo. Chiyero cheWC19 parizvino chinoshanda kune vana wiricheya yevana vane makore matanhatu zvichikwira, nepo 7176-19 inoshanda chete kune mukuru mavhiripu panguva ino. Kunze kwemaviri akasiyiwa, izvo zvinodiwa uye nzira dzekuyedza dzeWC19 dzinonyanya kudzvinyirira kana kudzvinyirira kupfuura ye7176-19. Izvi zviviri zvakasara ndezvekuti:
WC19 inobvumira iyo wiricheya nzvimbo dzekuchengetedza dzinofanira kupatsanurwa padyo padyo padyo pamwe, uye
WC19 inobvumidza mazana mana emakumi mana emakumi ekumashure kwekumusoro kwemisoro yemurume mukuru wepakati ATD panguva yekudzokerera, nepo 450-7176 ichibvumira chete 19 mm kana yekumberi musoro kushanya.
Saka zvinogona kugumiswa kuti:
kana iyo yekusiyanisa nzvimbo yekuchengetedza nzvimbo pa wiricheya iri 250 mm kana kupfuura, uye
iyo yekumberi ATD musoro wekushanya panguva yepamberi kukanganisa bvunzo yeiyo wiricheya iri pasi pe400 mm,
a wiricheya inoenderana zvizere neWC19 inoenderanawo ne7176-19.
Kupesana kwechirevo ichi, zvisinei, hachisi chokwadi. Ndokunge, a wiricheya inoenderana ne7176-19 inogona kunge isingaite WC19.
Ini ndaizokwanisa kugeza macush angu?
Hongu - Zvizhinji wiricheya makushoni anouya negobvu rinobviswa rinogona kushambidzwa nekuomeswa nemuchina. Zve AEIGIS® makushoni, anogona kushambidzwa zvachose pasina kubviswa goko. Kune mamwe zvakare macushion ekutsiva aunogona kutenga kana vakura uye iwe uchida kutenga nyowani nyowani.
Chii chinonzi Warranty yangu?
Click pano - Waranti inogona kusiyana zvichienderana nerudzi rwechigadzirwa uye chikamu. Ndokumbira utarise garandi mutemo uye nzira dzekunyoresa dziripo.
Mari Inopa Mibvunzo
Ndeipi sosi yemari inowanikwa yekutenga wiricheya yangu?
“MuUS mune mabudiro emari akasiyana siyana ekutenga yako wiricheya yemawoko. Vamwe veVatengesi vanotopa Zero Percent Inobhadhara Mari *
Medicaid, SCHIP, Medicare uye zvimwe zvirongwa zveinishuwarenzi zvehurumende kana zvirongwa
Yakavanzika Inishuwarenzi (HMO, PPO, nezvimwewo)
Mapurogiramu ekutanga ekupindira
Mapoka munharaunda yako senge Rotary makirabhu, Shumba, nezvimwe.
Kuremara mapoka akadai seMDC, MS Society, nezvimwe.
Nezve zvekuwedzera mari sarudzo, ndapota shanya www.abledata.com kana kutaura kumutengesi waunogona kuvimba nekushanyira yedu Mutengesi Locator.
Chii chinonzi Medicaid?
Medicaid chirongwa chehutano chevabereki vanowana mari shoma, vana, vakuru, uye vanhu vakaremara. Inobhadharwa pamwe chete nehurumende nehurumende yemubatanidzwa, uye inotarisirwa nehurumende, nenyika imwe neimwe iine gadziriro yayo yekukodzera. Zvirongwa zveMedicaid zvinosiyana kubva kumatunhu kuenda kudunhu, zvisinei, nyika dzese dzinofanirwa kupa seti yakazara yemasevhisi kuti asangane neFederal zvinodiwa zvekutapa kwehutano hwevana (kubva pakuberekwa kusvika pamakore makumi maviri nerimwe) pasi pechirongwa chavo chinonzi Early Periodic Screening, Diagnosis and Treatment ( EPSDT). Nekuda kweEPSDT, Medicaid inogona kuve yakanaka sosi yekutsigira mari kune vana vanoshandisa mavhiripu. Kuti uwane rumwe ruzivo rwakadzama, ndapota tarisa kune http://www.cms.hhs.gov/MedicaidGenInfo/.
Chii chinonzi Medicare?
Medicare ndiyo chirongwa chekurapa chakapihwa mari kumamiriyoni eAmerica ane makore makumi matanhatu nemashanu zvichidarika icho chinobata mari dzekurapwa dzakadai sekushanya kwachiremba, kugara muchipatara, zvinodhaka uye kumwe kurapwa. Iyo zvakare yakakosha sosi yemari mavhiripu nemimwe midziyo yekurapa yakasimba.
Medicare Chikamu B chikamu cheMedare chinobhadhara mavhiripu. Kana zvasvika kune yako wiricheya, vatengi uye vatengi vezvemichina yekuvandudza vanofanirwa kubata neDurable Medical Equipment Regional Carrier inoshumira nyika yenyu. ”
Ko Yangu Karman Manual Wheelchair yakafukidzwa neangu yakavanzika inishuwarenzi chirongwa?
zhinji mavhiripu dzinodzoserwa nekambani dzakavanzika nedzimwe makambani einishuwarenzi, asi marongero ese haana kufanana. Tarisa neako inishuwarenzi anotakura kuti uwane ruzivo pamusoro peizvo mutemo wako unovhara, kana bata wako wepanzvimbo weDME (Durable Medical Equipment) mupi uye utaure neyavo reimbursement nyanzvi. Kana iwe uine chero matambudziko nechero "IN NETWORK" makambani einishuwarenzi uye uine nguva yakaoma, ingo taura nesu kutanga.
Chii chinonzi Med Waiver?
Iyo Medicaid Waiver Chirongwa inovhara masevhisi asingawanzo kuvharwa neMedicaid, ayo anogona kusanganisira zvekurapa zvekushandisa. Aya mapurogiramu anowanikwa mumatunhu mazhinji uye anowanzo nongedzwa kune akananga Kuremara kana vanhu vezera.
Nyika dzinogona kupa akasiyana masevhisi kune vatengi pasi pechirongwa chekusiya HCBS uye huwandu hweshumiro dzinogona kupihwa haigumirwe. Aya mapurogiramu anogona kupa mubatanidzwa wezvose zvechivanhu zvekurapa masevhisi (kureva mazino mabasa, ane hunyanzvi mabasa eukoti) pamwe neasina-ekurapa masevhisi (kureva zororo, kesi manejimendi, kugadzirisa kwezvakatipoteredza).
Nyika dzine hungwaru kusarudza huwandu hwevatengi kuti vashande muchirongwa chekuregedza HCBS. Kamwe painotenderwa neCMS, nyika inobatwa kune huwandu hwevanhu vanofungidzirwa mukushandisa kwayo asi ine mukana wekushandira yakakura kana mishoma nhamba yevatengi nekuendesa chinongedzo kuCMS kuti chibvumidzwe.
Hurumende yeFederal haigone kuona kukodzera kweMedicaid, kusanganisira kusunungura uye kuratidzira mapurojekiti. Nyika yega yega ine maitiro ayo uye maitiro ekubata. "
Ko Medicare kana Medicaid ichabhadhara yangu Karman Wiricheya?
MuUS, mazhinji mavhiripu inodzoserwa neMedicare kana Medicaid. Ndokumbirawo ubvunze wako wepanzvimbo DME mupi rubatsiro uye ruzivo pamari munharaunda yako.
Ndeipi kodhi yekubhadhara yezvokurapa yeKarman Manual Mawiricheya?
Our mavhiripu dzinoiswa seDurable Medical Equipment uye yakapihwa HCPCS Makodhi. Ndokumbira utarise kune edu HCPCS Kodhi Chinyorwa kuona macode edu akataurwa.
Chii chinonzi HCPCS Code?
Healthcare Yakajairwa Maitiro Ekukodha Sisitimu nhamba, nhamba dzakapihwa basa rega rega, sevhisi uye chigadzirwa chiremba anogona kupa kumurwere. Zvigadzirwa zvinosarudzika zvinoenderana nekufanana mukuita uye kana zvigadzirwa zvichiratidza kusiyana kukuru kwekurapa kubva kune zvimwe zvigadzirwa. Sezvo munhu wese achishandisa macode akafanana, zvinovimbisa kuenzana munharaunda yese yekurapa. Kuti uwane kuongororwa kwakadzama, ndapota tarisa kune http://www.cms.hhs.gov/MedHCPCSGenInfo/.
Click pano kuona HCPCS makodhi.
Chii chinonzi Tsamba Yekurapwa Kunodiwa kana Ruramisiro Tsamba?
Tsamba yeMurapi Inodikanwa kana Yekururamisa Tsamba inotaurira kuti ndeupi rudzi rwemidziyo yekurapa inodiwa nekuda kweyakavimbika mamiriro ehutano kana kukanganisika. Tsamba iyi inofanirwa kunyorwa nachiremba kana murapi uye inoendeswa kune waunobhadhara. Tsamba iyi inotsanangura kudiwa kwekiriniki kwemidziyo yakakurudzirwa kumubhadhari. Tsamba Yemuenzaniso
Ndingaite sei kuti ndive mutengesi mutsva?
Just CLICK HERE uye zadza iyo Dealer Chikumbiro. Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti vashandi venyu vanonzwisisa zvizere zvese zvirevo nemamiriro pavanosimbisa hukama hweB2B naKarman. Izvi zvinosanganisira ese marongero atakanyora pane yedu webhusaiti uye anogona kuwanikwa pazasi pamagumo ewebsite yedu. Kune zviwanikwa zvakawanda zvinogona kukubatsira nazvo HCPCS makodhi, mafomu ekuraira, mishandirapamwe yekushambadzira etc.
Ini ndinosvika sei pane mutengesi locator?
Kutanga iwe unofanirwa kuve uri unoshanda mutengesi. Kana iwe watove set up, ndapota tumira ruzivo rwese ku dealer@karmanhealthcare.com yekugadzirisa. Tingave vanopfuura vanofara kukunyora iwe uye zvakare kuona kuti iwe une ruzivo rwekuvandudzwa rwewebhu network yedu. Ndokumbirawo mutizivise pane chero zvinhu zvakachengetwa zvamunazvo nekutumira zvivakwa zvemasheya kune imwechete email. Ndatenda.
Ndeapi maKarman wheelchair modhi yandinofanira kuisa?
Tinokurudzira kuti utaure nemumiriri wako wekutengesa kutanga. Ndokumbirawo utibate pa 626-581-2235 uye kurukura nemumiriri wako wekutengesa pane inoenderana mamodheru anonyatso shandira yako demographic uye bhizinesi modhi. Kana iwe uri mune iri pasi pevashandi vejogirafi, saka tinokurudzira kuti iwe uchengetedze vese vatengesi vedu vakanakisa uye mamodheru ehupfumi pamwe nekupa yakafara mhando yezvigadzirwa zvakanaka zvinomiririra zita redu.
Semutengesi ndinoisa sei odha?
Kamwe a Mutengesi Kunyorera yapera, yako Mutengesi Locator data ichaiswa, uye iwe unozopihwa iyo Dealer Nhamba. Vatengesi vanokurudzirwa kutumira mumitemo yekutenga ku karmaninfo@yahoo.com. Kana iwe uri mutengesi weinternet, isu takabatanawo ne Commerce Hub kuitira kurerukirwa kwekugadziriswa uye kurarama data. Isuwo tinogamuchira odha nefeksi 626-581-2335 kana tongotifonera pa 626-581-2235. Ndokumbirawo ubatanidze:
1. Nhamba Yako Yevatengesi
2. SKU chaiyo yaunoda
4. PO # / Mutengo
5. Iva nechokwadi chekuti Akaunti yako iri Kushanda
* Karman anochengetera kodzero yekuRamba Sevhisi kune chero vasingatenderane Vatengesi vane yedu Kambani Inotungamira Misimboti nemitemo.
Ndeapi matanho ewiricheya?
Peji yega yega yezvigadzirwa inowana zviwanikwa zvizere zvezivo kubva pachigadzirwa zvigadzirwa, zviyero zvekutakura, uye kunyangwe UPC Makodhi. Heino runyorwa rweese zviyero zvinodhindwa zvese mune rimwe gwaro. CLICK HERE.
Ndingaite sei kuti ndisvike pakuziva iyo yose Karman Wheelchair Line kumusoro?
Kudzidza zvigadzirwa neboka kana dzidziso mavhidhiyo ndiyo imwe yenzira dzakanakisa. Imwe nzira kuenda zvakananga kune yedu ZVINOKOSHA PEJI by KUCHADZA PANO kwaunowana mukana weICD-9 Makodhi, HCPCS Makodhi, MaFomu Ekuraira, garandi, Bhuku reMuridzi, uye kunyangwe mapepa ekumisikidza akakwirira iwe aunogona kuprinda uye kutumira mune yako sho
Ndokumbirawo zadza fomu pazasi kuti ugamuchire ruzivo maererano nekubvunza kwako. Iwe unogona kutipa kufona pa 626-581-2235, kana ndapota tsungirira nesu apo isu tichipindura kubvunza kwako.